VaTrump, Q-Anon uye 'kuchenesa kwakadzika' ngano (Robert Jensen, Janet Ossebaard): Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 25 March 2020	• 17 Comments
Kunyangwe hazvo Robert Jensen anoita kunge abva kumapato ezvematongerwo enyika akapfuura, achiri fanano mukuru waTrump. Mavhidhiyo ake parizvino akatariswa zvakanyanya, kungofanana neiyo nyeredzi nyowani mudenga; mukadzi anotenda maUFOs uye madenderedzwa ezvirimwa: Janet Ossebaard.
Izvo zvakanaka pachazvo kuti titende maUFO kana zvirimwa, asi sekureva kwangu tinoziva zano rekubatanidza vanotsvaga chokwadi kuna kolder. Nekudaro, vaviri Jensen naOssebaard vanotenda kuti Donald Trump achaponesa pasi. KuOssebaard izvi zvino zvakabatana zvakajeka neiyo 'yakadzika' uye 'Q Anon' nyaya. Robert Jensen anozvitora zvishoma zvishoma, nekuti zvimwe anoyedza kusabatana neiyo zano rekurangana kwenguva yakareba sezvazvinogona.
Ndichaedza kukutsanangurira chikonzero nei ini ndichifunga kuti tiri kubata neecurity net pawns pano. Ini handisi kuita izvozvo kuita vanhu vatema, asi ini ndiri kuita izvozvo kuti ndikupe imwe maonero akasiyana enyaya iyi, kuitira kuti iwe ugokwanisa kuzviisa mukufunga kwako.
Ndedzipi dziya dziya dziya dzekuchengetedza?
Kuchengetedza net pawns vanhu avo, panzvimbo yeiyo imwechete yemagetsi block iyo yatinofunga kuti tinogona kuziva shure kwenhau, vane mukurumbira mune imwe nzira midhiya uye vanoona kushomeka kushoma kubva kune vezvenhau kana vezvenhau. Vanosundira mamwe mhepfutepfenyuro mune yavo network. Mainini channels anopawo kutaura nezvavo (kunyangwe kana ari akaipa: chii chinokupa kutarisisa inokura). Mukuwedzera, ivo vangangodaro vakatsigirwa zvakasimba nehuwandu hunodiwa IMBers uye nevanhu vanongodonha nekuda kwe 'yakanaka yekurira nyaya', pane venhau.
Mushure me911, semuenzaniso, maive nemunhu akadaro muUS; mumwe munhu akaunganidza vatsigiri vakakura nekuvhura zvimwe zvisiono zvehofisi 911 kuverenga .. Pasinei nekuti iwe unotenda here kana kuti kwete 911 raive basa remukati. Uyu Ace Baker akakwanisa kuwana yakakura kutevera pakati pevanhu vaitenda kuti 911 ibasa remukati. Akafukidza marudzi ese ezvifungo uye akapisa avo vaaifunga kuti yaive nyaya dzakaipa. Aive, sokunge zvakadaro, iyo uso we 'kufamba kwechokwadi', sokudamwa kwaiitwa.
Paakange ave nekutevera kukuru, akaita chimwe chinhu chisina kutarisirwa. Munguva yeradio, akangoerekana atanga kutaura kuvabereki vake, mudzimai nevana uye mukanzwa pfuti, yakabva yanyarara uye muridzi wenguva ndokuti: "Ndinovimba ichi hachisi chokwadi." Pasina nguva yakawanda gare gare, iyeyu Ace Baker akashanduka kuve mupenyu zvikuru zvakare. Nenzira iyi akapusha kutendeka kwe 'chokwadi kufamba' mune imwechete. (teerera heino chidimbu)
Nekudaro, kune mamwe marongero mazhinji, akadai seaya mune iro rimwe zita rinozivikanwa mune 'chokwadi kufamba' rakazofumurwa semutungamiriri mukati me'Vana vaMwari '; sekete raikurudzira bonde nevana vadiki. Nekuti Zen Gardner uyu akakwanisa kubatana nevanhu vazhinji mune 'chokwadi kufamba', vanhu vese avo vakatapukirwa.
Yakawanda net akachengeteka pawns anoshandiswa nemasevhisi kunyanya kuburitsa chokwadi chakajeka kana chokwadi chiri pachena. Nekuti ivo vanosundirwa pese-pese, vanowana vateveri vakawanda. Isu tinoona zvakafanana naRobert Jensen naJanet Ossebaard. Chinangwa chenguva refu ndechekuti sechikepe chekuredza vanogona kudhonza vanhu vazhinji sezvinobvira mumambure avo ekuchengetedza, uye vobva vapusha chikepe chehove nekuvhundutsa. Izvi zvinoita kuti ugone kunyadzisa vanhu vakaomarara uye uchivachengeta kubva zvino kuenda mukuwirirana neiyo main media media nezvematongerwo enyika.
Kuchenesa yakadzika uye Q Anon
Ivo vaviri Robert Jensen naJanet Ossebaard vane tarisiro huru yaDonald Trump. Kurangana kweQ Anon kwakavakirwa pane munhu anoisa mameseji pakapetwa, vanotaura nezve kwakadzika zvekuti Trump aida kudonha naDonald Trump uyo ari kurwisa zvakadzika kudaro. Kune runyerekupe rwekuti Q Anon rudzi rweAI chirongwa uye ini zvakare ndakakurudzira sarudzo iyoyo muzvinyorwa zvakapfuura.
IBM yakadzika yeBlue Blue supercomputer yakakunda al mu 1996 yemakwikwi epasi rose Kasparov ne chess uye Google Alphabet's Quantum Computer muna 2016 mhare yemunyika yemutambo wakaomesesa Enda unorova. Saka zvine musoro kuti hurumende dzishandise makomputa makuru muchirongwa chavo achibatana nenhepfenyuro uye mamwe ma media media, akasanganiswa nechero data hombe revanhu (ravanotora munguva chaiyo).
Asi ngatisiye izvo pakati. Mukutungamira, tinogona kufunga kuti hurumende dzinoziva kuti pane kupokana nguva dzose pakati pehuwandu. Saka kana vachigona kuvaka icho kupikiswa ivo pachavo uye kutora mapoka makuru evanhu, ivo vanoita zvakanaka. Q Anon anongogona kuve chikamu cheiyo chengetedzo yetiyeki net.
Muenzaniso weQ Anon mazano andakagamuchira zuro. Izvo zvese zvinoratidzika chaizvo kuporofita, saka zvinopa fungidziro yekuti Q iri kunyatsoshanda naTrump. Sei zvimwe vangaziva zvese izvi? Ingoverenga:
Door: Dr Russell McGregor
Kutonga kweimba yepasi rose kuchapfuurira kusvika zvese zvazopera muna Kubvumbi 10 (Rakanaka Chishanu). Izvi zvisati zvaitika, mazuva gumi e "rima" achatanga mangwanani aApril 10, uye mazuva iwayo achazopera muna Kubvumbi.
Panguva pfupi kusati kwatanga 'rima', POTUS inotumira Tweet ne: Vandinonamata navo maAmerican ... dutu riri pamusoro pedu …… ”(" Vandinonamata navo maAmerican ... Dutu rasvika ...) "Chimiro cha'April 1 'kuda pakutanga kuderedza kunetseka nezvekuonekwa kwe "rima." Kana "rima" rikaitika, kuchave nekukasira kwekuvhunduka kwakatenderedza Coronavirus uye yepasi rose yekurapa yekurapa. Iyi yekukurumidzira yekurapa ichave yakaziviswa pakutanga kwaKubvumbi 1 mumaguta akawanda (uye nyika. Vert.).
Vanhu vazhinji vachange vazvigadzika pasi pehusungwa hwemba uye vazhinji vakavaka zvekudya, nezvimwewo.
MuAustralia, vasingashande uye pamudyandigere vanowana madhora mazana manomwe nemakumi mashanu nemusi waKurume. Dzimwe nyika dzichaitawo gadziriro dzakadaro kuitira kuti vashoma vafe nenzara. Zvimwe zvitoro zvechimbichimbi zvinoramba zvakavhurika kuti zvitengese zvinhu zvinodikanwa kwazvo, asi zvitoro zvakawanda zvinovharwa.
Munguva yemazuva gumi e'rima ', hapana media yemagariro kana internet inowanikwa. Pachave nemagetsi, asi hapana radio neTV. Hapana mapepanhau anodhindwa. Mauto enyika imwe neimwe achavhara vaparidzi ava.
POTUS ichave neZVIRI nzira iripo yekusvitsa vanhu pasi rese mukati memazuva gumi e'rima 'uye iyo ichave kuburikidza neEmergency Broadcast System. Hondo dzese pasi rese dzinoendesa izvo kumaTV nemidziyo iri munyika dzadzo.
Potus ichave iri mumazuva e "rima", kungave kunze kwenyika, kana mubhazi reAforforce One. Icho chinonzi chikonzero chekushandisa iyo Airforce Imwe chichava chekuchengetedza uye / kana njodzi yekutapukirwa. YeEmergency Broadcast System ichave inotepfenyurwa kubva kuAirforce One. Saka pachave nenhau inoshanda blockchaini, kunze kwePOTUS.
Nyanzvi dzakagadzirwa zvinyorwa zvichatepfenyurwa pasi rese kumaTV uye zvimwe zvinoshandiswa kuburikidza neEmergency Broadcast System. Zviri mukati mayo zvinotsanangura zvese zvinotyisa, mhosva uye ruzivo rwezvinhu zvese. Izvo zvirimo zvichave zvine hushamwari hwemhuri uye zvichave zvisingabvunzwi.
Potus achatsanangura kuti akabvunzwa sei nevekuUnited States mauto kuti akwire nzvimbo yakadzika uye kuti haazi "wezvematongerwo enyika". Iye achasimbisa ruzivo rweQ. Aya zvinyorwa anozoratidza kureururwa kwakanyorwa kubva kune vakakurumbira veMiddle State vezvematongerwo enyika uye vanhu vakakwirira. Maitiro ehutongi hwenyika anozotsanangurwa. Uchapupu hwemhosva hucharatidzwa. Zvinotaurwa nematare edzimhosva zvichaziviswa pachena.
Iyi mharidzo dzichashambadzirwa, toti kwemaawa masere pazuva, mukati memazuva gumi akazara. Kudzokorora kuchaitika zuva rose kuitira kuti avo vachiri kushanda uye vanonunura vasapotsa chero chinhu. Nhepfenyuro saka dzinoenderera kwemaawa makumi maviri nemana pazuva. Mhuri hadzina chadzingaite kunze kwekuona idzi. Mavhidhiyo anotyisa kwazvo ane humbowo haazoitwe nemunhu wese, anogona kutariswa nevaya vanoda mushure memazuva gumi 'erima' paInternet.
Pachava nekushamisika kukuru, kutyisa uye kuvhiringidzika. Basa redu sevazukuru richava rekupa kudzikama, kusimbisa, tsitsi, uye kusimbisa. Vazhinji vazvarwa vekare vaimbotya kutaura vanogona kushinga.
Hazvibviri, asi zvinogoneka, kuti JFK Jr nevamwe vachaparira kutendeka kweopa oparesheni. Kana mazuva gumi e "rima" pane Akanaka Chishanu apera, pachave nekuputika kukuru kwekunamata.
PaChishanu Chakanaka, vanhu vanozoudzwa kuti hutachiona hwachengetedzwa uye mumwe anogona kubuda nekudzoka pamwechete. Makereke, masinagogi uye mamisikiti achave azere. Kuchave nekutambudzika kukuru, asi zvakare zororo.
Chikamu chidiki, pamwe 5%, chichava chisina simba uye chakagadziriswa pfungwa kusvika kure kugamuchira chokwadi. Semazuva ese, ivo vachakonzera kukanganisa.
Iyo Yakadzika Yenyika icharasikirwa nekutonga kwezvese nekusingaperi Mauto anoongorora zviteshi zveTV uye vaparidzi vemapepanhau kudzivirira kuparadza. Mushure mekudema, mhepfenyuro yakasimbiswa ichafumurwa zvizere uye haigone kuramba nyaya.
Vakadzama veProvince State vasina kuzvipa uye vasina kuendeswa kuGuantanamo Bay vanozozviisa pasi pekuponda vhiki yaKubvumbi 11-12, 2020. Vanhu vasina tariro vanozobvumirwa kuzvidzivirira kubva kuvanhu vazhinji vane ruzivo.
Ikozvino zviri pamusoro zvinokwana mushe zvakare nemusangano wezvekupedzisira weDoald Trump musangano wekuzivisa kuti anoda kuti vanhu vekuAmerica vakwanise kusimuka vakasununguka kuenda kukereke panguva yeIsita. businessinsider.com. Saka nyaya yeQ Anon inoita kunge inokodzera pane zvinotaurwa naTrump, ichiita kuti ive yakatendeka. Hapana munhu anoziva kuti masevhisi akanyanya kutamba machira ese.
Saka chii chiri kunetsa naRobert Jensen
Iwe hauzondinzwa ndichitaura kuti pane chakashata naRobert Jensen somunhu. Ini ndinongofunga iye anoshanda sechengetedzo net pawn uye seya yakadzidziswa master communicator iye anonyatsoziva nzira yekuzadza kuchengetedza mambure. Isu rake harisati riripo rekuzivisa pachena iro Q Anon dzidziso. Nekudaro, akatorumbidza Donald Trump muvhidhiyo yake yekupedzisira yaTrump achiti mhinduro haifanirwe kuve yakaipa kupfuura dambudziko.
Jensen anotsigira kuti iyo coronavirus yekuvharira matanho yakanyanya kudhakwa uye vazhinji vanozobvumirana naye. Anotarisa huwandu hwehuwandu hwekufa uye hukama nekubatika kwenyika yese, kusanganisira migariro yehupfumi. Iye zvakare anowana izvi bloomberg gwaro, randakabatanidza kare mune imwe nyaya yapfuura. Inotsanangura kuti 99% yevanhu vakafira muItari vakatova nemamwe mamiriro ezvinhu kubva kwavangazofa.
Zvino iwe uchati:Zvakanaka uye? Chii chakashata neizvozvo? Ari mushe ipapo!"Ndakatsanangura pamusoro apa kuti mambure ekuchengetedza haatauri kureva nhema. Ivo vanogona kana kukuratidza chokwadi chizere. Icho chinangwa chemambure ekudzivirira ndechekuti iwe unobatanidzwa kune chaiyo muviri wefunga kana munhu. Munhu iyeye panhau iyi ndiDonald Trump.
Kana zvikazopedzisira zvaonekwa kuti Donald Trump haasi kuchenesa zvakadzika uye kana zvikazoitika kuti nyika ichachema kuti Donald Trump, semuenzaniso, vakaita chikanganiso chakakura nekusiya maAmerican mumugwagwa zvakare mukati mePaseka vhiki (nekuti kana, semuenzaniso, chirwere chekoronavirus chingangoerekana chavapo, asi zvakanyanyisa zvakanyanya), ivo vatsigiri vaDonald Trump pamwe naJensen vakapwanywa mune imwe yakawira pasi. Ipapo munhu wese achadana kusungwa kweavo vese vanogunun'una vakaramba kuona kuti hutachiona hwe corona hwaive nengozi sei.
Ndapota cherekedza: vezvenhau vanogona zvakare kuparadzira izvo zvinogona kuitika zvekare, asi nekudaro hauchazove wakasununguka kufunga zvakajeka kuburikidza nechengetedzo net zano nekuputika kwaRobert Jensen mambure. Muchokwadi, 'kufunga kwakasimba' ndiyo njodzi kwazvo yepfungwa panguva iyoyo.
Chii chiri kunetsa Janet Ossebaard
Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti ini handisi kuzorwisa vanhu, sezvandave ndichiita kwemakore anopfuura manomwe. Handidi 'pazasi pebhandi'. Ini ndinonyevera nezve zano rekucherechedzwa. Iyo nyaya yekuti kune vanhu vanogona kushandira muchivande masevhisi nekuzvibvumira kuti vaiswe seti yekuchengetedza, ndeyehana yedu neKarma kuenderera.
Kuna Janet, zviri pachena kuti anozivisa the Q Anon theatiki mumavhidhiyo ake. Saka iye anonyatso kukurudzira kuti ugare shure uye kumirira uone izvo zvinoitika. Kununurwa kwaTrump kunofungidzirwa kuti kuri pedyo. Ndakatonyora nezvazvo Dit en Dit chinyorwa.
Chii chatingaite ipapo Zvakanaka tenda, chii chasara chakanaka?
Chaizvoizvo iwo mafungiro ndiwo maitiro anowanikwa kana iwe uchinge waona kuodzwa mwoyo pawabatwa mumambure ekuchengetedza uye ngarava yese yakanyudzwa. Ndosaka ndichigara ndichitaura kuti ndezvekuziva kwako. Uye zviri mune imwe pfungwa umo Robert Jensen anochengetedza iro izwi mune yake yazvino kupararira.
Izvo zviri zvese nezve 'kuziva kwako' mupfungwa ye 'kwazviri kuva kwako'
Mubhuku rangu ndinotaura nezve kuziva chaiko uye ndinotaura nezvehutachiona-hwese hutachiona hunoda kutiunza mukubatwa kwayo. Ndakanyepedzerawo denda mune izvi, zvatiri kuita izvozvi. Kunyanya kukosha, zvakadaro, ini ndinotsanangura kuti hatingakwanise kuwana zvakawanda pamutumbi wemuviri. Iwe unonyatsofunga here kuti kana varimi vese vakaenda kumigwagwa kana isu tese tikarara pasi en masse, isu tinogona kuchinja chimwe chinhu? Nyika yakatozviratidza kuti inogona kuvhara hupfumi hwese pasina kuvayemesa.
Zvatinogona uye zvatinofanirwa kuita zvinopfuura zvinotarisirwa zvevanobva kune dzimwe nyika avo vanouya kuzotinunura; inodarika tarisiro yekuti Q Anon naTrump vanouya kuzotinunura. Zvatingaite zvakakura zvakakura! Zvatinogona kuita ndezvekuziva rako rekutanga simba rekugadzira. Ini ndinotsanangura icho mubhuku. Unogona kutenga izvozvo. Iwe unogona zvakare kuverengera mahara mune zvinyorwa zvakawanda, asi nekuti iwe uri kumba uye nekuti iwe une nguva yekuverenga; nekuti iwe unogona kuwana rako rechokwadi simba; nekuti tinogona kukunda kutya uye nekuti isu tinokwanisa zvakawanda kupfuura zvatinofunga: saka mukana wekuverenga pfupiso iyi:
Ongorora: Ini ndakatsoropodzwa kakawanda mumazuva mashoma apfuura kutsvaga kwekutengesa mabhuku kuita mari. Iri bhuku rakanyorwa pachikumbiro chevaverengi kuitira kuti vabatanidze izvo (zvakasununguka kuverenga) zvinyorwa kubva makore achangopfuura kupinda chimwe chinhu chinogona kuverengerwa muzuva rimwe.
Source chinyorwa listings: ydc.com, businessinsider.com, bloomberg.com
Ndokumbira utarise: iyo Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) zvinyorwa zvinyorwa zvisiri zvemanyepo
Coronavirus COVID-19 dambudziko: hutachiona, bioweapon kana hoax yekugadzirisa mari uye yehutongi hwehutongi?
Iyo Bill Gates 'quantum dots' iyo isina waya ID kadhi iyo inocherekedza kana iwe uine coronavirus uye kana iwe wakachengetedzwa
Coronavirus, nzanga inomesa kana kuwana vanhu?
Tags: pakarepo, deepstate, Featured, Janet, Jensen, suka, Ox-ndebvu, Q, Robert, Trump, kuchengetedzwa net net, safe net pawns
25 March 2020 pa 19: 30
Hazviratike sezvisingabviri kuti Jensen achasimudzira mutungamiri weBrazil Jair Bolsonaro munhepfenyuro yake manheru ano
Ziva kuti ichi chikamu chechipiri-musasa zano uye yekuchengetedza mambure maitiro. Saka: vanoramba iyo coronavirus kana avo vanoti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka vachakurumidza kurangwa zvakaipisisa nekuda kwerumutsiridzo hwehutachiona (zvirinani izvo zvinoratidzwa nevezvenhau uye nezvematongerwo enyika zvakaoma kuburikidza nehuwandu). Ipapo vese "vanotsoropodza" vanomutswa. Funga nezvemisasa yekudzidzira, misongo yematirongo, nezvimwe.
Trump naBolsonaro chikamu chemutambo uyo. Kufungidzira Trump mushure mePaseka zvinoita senzira ine musoro yekufungidzira.
25 March 2020 pa 22: 25
Ndichingotarisa nhepfenyuro yeJensen uye kuona kwangu kwakazova chokwadi… (35:25 min.)
28 March 2020 pa 11: 51
SaTrump, Bolsenaro zvino anozvimisikidza se "anopenga uye akaipa populist / wakanyanya kurudyi mukomana. Zviri nyore kusekerera kuti unzwisise kana iwe uchiona kuti zvese zvinoshanda sei.
Jensen parizvino ari kuturawo imwe rondedzero yakati siyanei nezvematongerwo enyika yeNL. Vezvematongerwo enyika vakatsauswa uye vakanyengerwa nevepamusoro venhau, nekuti vezvenhau vane simba rakawanda. (kana usingaiti zvatiri kutaura isu tinogonesa kuita mhuka dzesango).
Saka sekureva kwaJensen isu (avo vakasvinura) tinofanira kujekesa kune vezvematongerwo enyika kuti vanofanirwa kuchinja, saka zvinhu zvese zvichave zvakanaka.
25 March 2020 pa 20: 01
Uri chokwadi kuti ivo vanosanganisa chokwadi.
Ndine chokwadi chekuti zvinhu zvese zviri kuitika padanho remweya izvozvi. Vanhu vazhinji vanopotsa izvi nekuda kwezvinhu zvese zvinotsausa. Paunenge iwe uchinge wapedzisira wasununguka kubva kubasa, isu tinopinda mukati meti netflix, kusagadzikana uye mavairasi.
Zvitorere kure, kusunungura, kukanda kunze, discharge uye enda kune yakakwirira chikamu.
25 March 2020 pa 20: 38
Izvo zvese dzimwe nguva kuora mwoyo zvachose. Kunze kwePrince Charles weEngland izvozvi zvakare ane corona (ndinomuda zvakanaka munguva pfupi lol).
Huwandu hwevanhu vanozivikanwa vane corona hunofanirwa kusvika izvozvi vava 1 mu makumi mashanu. Asi vanhu vanoona izvi zvakajairika nekuti vanokandirwa kurufu mune vezvenhau nehuwandu (never mind muzana !!!) semuenzaniso huwandu hwevanhu pasi rose (maererano neMSM) vanoita kunge vanayo. Izvi zvinosvika mazana mana ezviuru zvichienderana neMSM
98% yevanhu vanoona nhamba iyi havazivi zvazvinoreva zvachose. Kana vanhu mazana mana ezviuru pasi rose vane corona izvi zvinoreva kuti vanenge 400.000 muvanhu zviuru gumi nezvisere vari munyika vane corona !!!
Ini nemunun'una wangu uye nevamwe vashoma vakasvinuka zvakare takafara, ini ndakaitisa ongororo diki pakati pevazhinji vanhu vane hushoma hwepakati hwehungwaru, ndichivabvunza, pakati pezvimwe zvinhu:
Huwandu hwakazara hwehutachiona hwekorona munyika mazana mana. Yeperesenti ipi yehuwandu hwepasi rose iyi?
Mhinduro yepakati yaive (tenda kana kuti kwete) kuti vanhu zviuru mazana mana vaive pakati pe400.000% uye kunyangwe 1% yehuwandu hwenyika. Vaviri chete pagumi ndivo vakapa mhinduro chaiyo.
Izvi zvinoreva kuti kana munhu akaenzana wechiDutch (uye pamwe nevanhuwo vanobva kune dzimwe nyika) kana anonzwa kana kuona huwandu hwehutachiona hwezviuru mazana mana zvakanyorwa pasi rese, iye anofunga kuti ichi chikamu chikuru kwazvo chevanhu vari munyika (wow watove 400.000% kana 1% yehuwandu hwepasi rose ine corona, kune ngozi sei).
Ndakaona zvakare kubva kuna Jair Bolserano. Chinhu chinonakidza ndechekuti Putin anotenderwa kusimudzira iwo maonero akasiyana muRussia: Putin anoti zvine njodzi uye kuti maRussia anofanirwa kutevedzera Big Big madhiri uye kuti mumwe anofanirwa kutarisisa (Putin anoti nezve zvakafanana naRutte)
Sei rinogona kunge ruzhinji pasi rese rara? Ivo vanoita kunge vakave vakafirwa neyeLuciferian elite. Chokwadi munhu anofanira kukwanisa kufunga zvishoma uye kuverenga kuti zvakangoita kunge hapana munhu munyika ane corona? (kunze kweiyo vanhu vanozivikanwa, anenge munhu wese anoita kunge ane corona).
25 March 2020 pa 21: 32
Sezvo iwe uchiziva iwe unofanirwa "kuteerera kune nyanzvi" 😉
Chero zvakadaro ... manhamba manhamba nekuti vezvenhau nezvematongerwo enyika vanotitaurira idzo nhamba. Trumanshow? Iwe hauzive.
Chatinoziva ndechekuti vanhu vanotora chinzvimbo chekuti mukukura kwakanyanya unoona hushoma huwandu pakutanga kusvika iyo curve ichisimuka semuseve.
Izvo hazvibatsiri kutarisa vanhu pane nhamba kana muzana kana curves.
Izvo zvinobatsira kutarisa vanhu pane izvo chaizvo sezvazvinonzwisisika.
ellysa akanyora kuti:
26 March 2020 pa 02: 51
izvo zvandaimboziva / kudzidza mune yangu "dzidzo" PR-yeruzhinji hukama ndeyekuti zviverengero - kana zviverengero sezvazvaidaidzwa chaizvo - ndizvo zvakakodzera chimbo (nzira) kupururudza nacho. Kubatana kwevanhu paruzhinji = kutamba / kupepeta vateereri. Nhamba iwe unogona "kuderedza" munhu wese mamiriro / mamiriro / munhu kune munhu akataura muvhiri. Avhareji, iwe unobvisa kukosha kwevanhu. Mafananidzo inzira yekuita manhamba. Tekinoroji yanhasi inoshandisa chete manhamba maviri chete - iyo zero uye imwe yekugadzira chinhu chakasimbisa. Kugadzira pamusoro.
Hazvina chikonzero kuti isu titi nezvenhamba dzavanotiita dzungu. Mune mamwe mazwi, iwe unorasikirwa nekwavo. Kana iwe ukarasikirwa nekwako, iwe unenge warasikirwa nechimwe chinhu, izvo mamiriro acho.
Kana iwe usina chimiro / mamiriro, uri nedudziro chidhanzi muruoko rweumwe munhu.
Nhamba zviratidzo, nzira yekutaurirana (neiyo pfungwa irikuru). Idzi nhamba idzi ndedzechokwadi dzisina chinhu, hapana chavanotaura, asi panguva imwechete ivo vanotaurira zvese kune vari mukati. Isu tasvika ikozvino panguva iyo riri sebasa redu kutsikisa nyaya (kupuruzira, mapundu).
Uyezve enzanisa nhamba dzemazwi echiRungu anotaurira kupfuura zvaungave pakutanga kuona (kukosha kwechiso) munhu anofungidzira. Kuita manhamba Nhamba / manhamba ari vhiza yekunzwa (= kunzwa kwakaderera) activation pasina (kusaziva) uchiona kuti kana usiri wekutanga. Iyo fundo yedzidzo yakagadzirirwa chaizvo izvo. Nhamba / manhamba anounzwa kwatiri mune imwe chete fomu, iyo isina chinhu fomu. Ndosaka tichifanira “kudzidza kuverenga” kuti tirege kubva paruzivo rwepasirese. Zvisinei, iyo imwe nyaya yakadzama. Ndinovimba iwe uchabvuma kune izvi zvakare uye kufunga kuburikidza.
26 March 2020 pa 07: 04
Semuenzaniso, kuisa munhu pasi pekukurukurirana hypnosis (ndosaka vanhu vachishuvira kuona TV kana chiteshi cheYouTube), zvakanaka kunyora nhamba shoma mumutsara. Izvi zvine mhedzisiro yekuvhiringidza kwako kufunga maitiro maitiro. Ivo vanoedza, sokunge zvakadaro, kutevera huwandu hukuru kana kuverenga, asi nekuda kwekuti pfungwa dzako dzinonetsekana "kuramba uchimuka", mutauri anopfuura nekuziva kwako uye anogona kurongedza pfungwa dzako dzisiri pasi nekuisa zvimisikidzwa.
Master communicator (kana NLP nyanzvi) Robert Jensen anoshandisawo maitiro aya.
Iwe unozvionawo zvakanyanya muvanhu vakaita saJeruen Pauw. Iwe une akawanda maitiro muNLP uye hurukuro hypnosis, asi nhamba uye nhamba zviri kuita chaizvo.
Ndokusaka iwe uchigara uine mamiriro ekunze pakupera kwebepanhau. Ipapo iwe uchaona nhamba uye iwe unokandwa shure uye kumberi pane mepu. Iwe unenge uri wakawedzera kubva pamepu (hypnotized).
25 March 2020 pa 20: 58
Kupera kwefuru wave!
Inotevera wimbi inouya!
25 March 2020 pa 23: 38
saka kana ini ndinyatsoona, mushure memavhiki gumi nemaviri muna 11 tine huwandu hwakaderera hwekufa pane rwonzi rwekutanga?
26 March 2020 pa 07: 37
"Unowana sei kuti ini ndiri anopikiswa unopokana Freeland? Ini ndinogara mumba yekutandarira uye ndinokuratidzai bank account yangu. ” Okay Janet, ndiratidze yako bank account uye wobva waratidza iyo imwe bank account.
"Dai ndangondidaidza, ndingadai ndakagadzirisa"
Uye iyo rondedzero Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) inobata pasi pechiratidziro nekushungurudzwa kupisa Vrijland (sezvavanoita pane yega yega blog uye ese ezvenhau venhau; iro ibasa ravo).
Chokwadi Janet akange agadzirisa mavhidhiyo ake nekuda kwekushoropodzwa kwangu. Dai ini "ndangomudaidza", angadai akangotora iyo 3 yakakura Q Anon yekusimudzira mavhidhiyo kunze kwenyika ndokugadzira mitsva nekugadzirisa nyaya yake yese. Hongu Janet, handiti? Kolder yechokwadi. Inonyatsofungidzirwa, yakanyatsogadzirirwa uye Q Anon kusimudzirwa yakatangwa panguva chaiyo.
29 March 2020 pa 16: 04
Mai J.'s bank account nhamba yaMartin yakavapa kune mumwe munhu aida kupa. Ff zvakakomba kuitika? NL33RABO03 ……… ..3 zvakare iri nhamba yekupedzisira. Vashoma nhamba kunze kwepachivande, kunyangwe iye akazvikanda kunze iye amene. Asi chitaure.
30 March 2020 pa 00: 07
Mhinduro dzeZero uye +/- 17.000 vataridzi, zvinoita sei paYT
uye anofanira kutaura nhamba yakanaka yemaminitsi 6 3, kana 666
ndinokutendai Janet, wakazora brashi Janet.
Chaizvoizvo paminiti 4; 23 iye anoti, Ndatyisidzirwa nerufu kwegore nekuda kwechirimwa, Janet Ossebaard the creepy charletan, chaizvo hey Janet, fonera Martin izvozvi
31 March 2020 pa 08: 35
Hahaha ... ooh ooh ooh ... murume murume murume ... yakakwirira sei iyo IQ inofanira kunge yakakwira kutora aya marudzi ehukuru.
"Ngirozi yako pasi" anodaro zvakare nezvake ..
Vanofanira kudzidzisa vatambi vetsiva zvirinani kuti vadzivise kudhirowa kuverenga chinyorwa. Kudonha kwekabha ..
Iwe unova sei nhengo yeIMB? Mukuchinjana mutsara wakaderedzwa? Ivo vatova pane itsva banking bank system iyo ichakurumidza kutsiva iyo yekare? Inoffizieller Mitarbeiters (IMB'ers): vanonyepedzera kuitora sevanhu, asi ivo ndivo vatengesi vakuru kwazvo; nhengo dzeNSB dzanhasi? Iwe une IMBers vanokuudza kuti ugare mukati meimba uye chengetedza magariro ehurukuro yehurumende mamiriro uye iwe uine IMBers vanokuudza kuti Q Anon naTrump vari kuchenesa cabal.
31 March 2020 pa 08: 36
Ah hongu uye Lange IMB'er Frans inogonawo kutamba mutambo
Peter Steegmans akanyora kuti:
2 April 2020 pa 19: 53
Ndinoda kunzwa kuti unofungei pamusoro paDavid Icke? Iyi zvakare ipini yakavanzika yekushora kwakadzorwa? Anonyanya kufumura zvakafanana naJanet Ossebaard.
Kana zvirizvo, iwe unoda here kutiudza isu nezve iwe kuti ungave sei 100% chokwadi nezve izvozvo?
Ini zvakare ndinozvibvunza mubvunzo unotevera, kana iwe ukafumura pedophilia pakadzika, senge Ossebaard (firimu remukomana asina kupfeka uyo anotiza kubva mumuzinda aine pepa nepahwindo) uye zvakare David Icke, asingaite chinhu kunze kweiye ane kubatanidza imwe uye kurongedza iyo hombe mufananidzo. Iko hakuna ngozi here kuti iwe unongodarika chinangwa chako? Mushure mezvose, iwe unoda kufambisa imwe vateereri uye wozvisiya gare gare seyisina kugadzikana mupfungwa. Izvo iwe zvausingade sesangano rematsotsi ndezvekuti zviitiko zvakavanzika izvo iwe zvaunonyanya kuda kuchengetedza murima zvinongoita ruzhinji kuburikidza nekushora kunodzorwa. Nekuti, zvirokwazvo David Icke akaita ruzhinji ruzivo rwevanhu mumakore makumi maviri apfuura, zvakanyanya kupfuura zvakajairwa jan aine ngowani aigona kurangana dzidziso. Sei uchienda zvakadzika semitarbeiter? Wadii kungoisa tarisiro yako pane izvo zvinobata ziso reruzhinji kuburikidza nemagariro enhau nezvimwe, usingakanganisi nezvimwe zvese. Hazvina musoro ...
2 April 2020 pa 23: 09
Janet Ossebaard ndeyechokwadi nenzira isina kufanana naDavid Icke, pamusoro pazvo anongoverenga nyaya. Icke ndeyekakati kusiyana kwakasiyana. Janet Ossebaard anototengesa iyo Q Anon nyaya, hapana chimwe chakaderera. Izvo zvinouya zvakananga kubva kune inoshora inopikisa Reuters-kunge fekitori.
Unogona kuratidza chokwadi chakawanda. Muchokwadi, iyo chikamu cheKaballism kuratidza vanhu zvakaipa. Mu "kumutsa" yemazuva ano zvakaipa nezvakanaka zvinofanirwa kuve pachena kune umwe neumwe mukubwinya kuzere. "Kumuka" pasina kufumura hunyanzvi (asi kungovhenekesa zviitiko zvezvakaipa) ndeyekunyepa kweusiku mu "kusimuka" kweLuciferian Kabalistic Way. Saka iko kumuka kwenhema. Izvo zvakakosha kuti tidzidze kuwana mutsauko. Kusunungura kwakachena uye kwakaipa chete munyika saka kuri chikamu chekumuka kunzira yeKabbalistic yakananga kuna Luciferi.
Izvozvi ini handina kuverenga mabhuku ekupedzisira eIcke, saka handizive kana ari kutaura nezve muraraungu naRusifa, asi kana mumwe munhu asiri kutaura nezve muvaki weiyi hutachiona hutachiona (hutachiona uhwu hwekufungidzira), isu tiri kungotarisa pane izvo kumutsa izvo zvakafanira kuti usanganisire neLuciferian AI (nehutachiona system; iyo yekunyepa kwenhema) panzvimbo yekumuka kuti uzive kwatakabva sosi - chokwadi chekuti isu tiri ani - uye tinobvisa pane izvo zvaLuciferian hutachiona system inoedza kubira chisikwa chepakutanga nekuedza kubatanidza kune kwedu kuziva (kuburikidza nekunyepa uye nekudaro nenzira yeKaballah mune zvakaipa zvinofanirawo kuuya nechiedza).
Muchidimbu: kuunza hwakachena uye chete kwakaipa kujekesa chikamu chikamu cheKabbalistic nzira yekubatana neLuciferian hutachiona system (iyo yekunyepa kwenhema).
Chinhu chakakosha ndechekuti tinoona kuburikidza nehurongwa hwese uye izvo zvinoreva kuti tinofanira kuziva iyo Luciferian hutachiona system uye nekuona kuti isu pachezvedu tinotakura yekutanga stem cell information. Iyo yekupedzisira saka zvakare ine "nzira yekubuda".
Kuti unzwisise zvakawanda ndinoreva bhuku rangu pamwe nezvimwe zvinyorwa:
Zvichida inguva yekuisa chimwe chinyorwa kwaari
« Coronavirus covid-19 Lockdown update: Paunomuka uye ukaona kuti wabatwa, chii chaungaita?
Meya weItaly anotyisidzira kutumira vatambi vehondo kunorwisa coronavirus »
Total Visits: 1.467.948
SalmonInClick op David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?
Lydia Roosje op Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: iyo imwe nehafu yemamita nzanga uye kusimudzirwa kwemapurogiramu